Pierre-Emerick Aubameyang Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa Arsenal Kaddib Guushii FA Cup - Miyuu Go'aansaday Inuu Sii Joogo Mise Wuu Tegayaa? - Gool24.Net
Pierre-Emerick Aubameyang Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa Arsenal Kaddib Guushii FA Cup – Miyuu Go’aansaday Inuu Sii Joogo Mise Wuu Tegayaa?
Weeraryahanka Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa Arsenal markii uu kooxdiisa ka caawiyey koobka FA Cup oo laba gool oo uu u dhaliyey ay 2-1 kaga adkaadeen Chelsea, waxaanay gacanta ku dhigeen FA Cup markii 14aad.
Pierre-Emerick Aubameyang oo wax ka yar 12 bilood ay ka hadhsan yihiin heshiiska uu kula jiro Arsenal, isla markaana lala xidhiidhinayo kooxo waaweyn oo Yurub ah, waxa uu ka warwareegayaa inuu ogolaado qandaraas cusub oo uu u saxeexo Gunners si uu usii joogo Emirates Stadium.
Arsenal ayaa walaac weyn uu ku hayaa mustaqbalka kabtankooda Aubameyang, waxaana haddii uu saxeexi waayo heshiis uu waqtiga ugu kordhinayo, ay ku qasbanaan doonaan inay xagaagan iibiyaan haddii kale waxa uu si bilaash ah kaga tegi doonaa marka uu dhamaado xili ciyaareedka dambe.
Laakiin Mikel Arteta ayaa kalsooni ku qaba inuu Pierre-Emerick Aubameyang sii joogi doono xataa iyagoo ka hadhay tartanka Champions League, kana ciyaari doona Europa League oo ay guusha FA Cup-ka darteed kaga qayb-geli doonaan.
Warar suuqa lasoo geliyey ayaa tilmaamayey hubanti la’aanta laacibkan ee kooxda ka dhisan woqooyiga London, waxaanay xogahani tilmaameen in Pierre-Emerick Aubameyang uu doonayo heshiis saddex sannadood ah oo uu usbuuciina ku qaadanayo £250,000.
Haddaba, 31 jirkan reer Gabon ayaa ugu dambayn ka hadlay mustaqbalkiisa kaddib guushii koobka FA Cup ee uu isagu lugtiisa ugu horseeday Arsenal.
Telefishanka BT Sports ayaa weydiiyey Aubameyang haddii uu sii joogayo iyo haddii uu tegayo, waxaanu bixiyey jawaab wali sas kusii abuuraysa Arsenal, isla markaana sii kordhinaysa mugdigii mustaqbalkiisa Emirates marka horeba saarnaa, waxaanu yidhi: “Anigu dhab ahaantii, waqtigan kama fikirayo arrintan, waxaanan kaliya doonayaa inaan hadda farxadda la qaato ciyaartoyda kale ee aanu koobka qaadnay.”
Waxa kale oo uu Aubameyang amaanay ciyaartoyda Arsenal ee uu kabtanka u yahay, waxaanu yidhi: “Waxaan u malaynayaa inuu qof kastaaba sida ugu wanaagsan u ciyaarray maanta, waananu u qalmaynay guushan. Safarku wuu dheeraa, waxaanu ku dhamaaday cawaysin wanaagsan, waxaana hubaal ah in caawa oo dhan aan faraxsanaan doono.”